မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ လုပ်ကိုင်မယ့် တရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး မထိခိုက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကို သတိပေးပြောကြားမယ်လို့ တရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲတွေက မြန်မာနိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ကတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီ ၅ ခုဟာ တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့က ကူမင်း၊ ယူနန်တို့ကို နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးအတွက် ၁၀ ရက်တာလေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ဆွေက ခရီးစဉ်အတွင်း ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကို RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
"ပြည်သူတွေကြားထဲမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အခါမျိုးတွေဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့လိုကြောင်းကိုလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါတယ်၊ လုပ်ငန်းတွေမလုပ်ခင်မှာပဲလာပြီးတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြဖို့၊ နောက် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း လျှိ့ဝှက်တဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မြင်သာထင်သာစွာနဲ့ ပြည်သူကိုချဉ်းကပ်ပြီးတော့ ကြိုတင်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း လက်ငုပ်လက်ရင်းတွေကို ဘယ်လိုကြည့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအမံတွေပါပါဖို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့ကလည်း လက်ခံပါတယ်၊ သူတို့ဘက်ကလည်း သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေကို စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို မထိခိုက်အောင်လုပ်ဖို့ ပြောပြပေးပါမယ်လို့ ကတိပေးသွားပါတယ်"
တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ တရုတ်စီမံကိန်းအများစုက အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုလို တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ ထိတွေ့တာဟာ ကောင်းတဲ့အလားအလာဖြစ်တယ်လို့လည်း သူကသုံးသပ်ပါတယ်။
တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကို မထိခိုက်စေဖို့ စီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာ ဒေသခံတွေကို မှန်ကန်တဲ့နစ်နာကြေးတွေပေးဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ထောက်ပြခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဖြစ်တဲ့ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွှတ်ရေးပါတီနဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေက တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ အကြီးအကဲတွေနဲ့ ခရီးစဉ်အတွင်းမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။
ဒီအကြောင်း RFA သတင်းထောက် မဇင်မာဝင်းရဲ့ စုစည်းတင်ပြချက်ကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
China must support the benefit of the ordinary people instead of supporting the dictators. In the past, China neglected the people's effort for democracy. China supported the dictators for prolong ruling.